Intente sinombuki zindwendwe onguErin
IYurt yabucala kwipropathi engasemanzini ebekwe kwi-30min ukusuka e-Ottawa. Le Yurt ikwipropathi enkulu yabucala eHay's Shore Estates (iihektare ezi-6) eluluntu oluncinci lwabucala. Yonwabela umlilo omnandi wenkampu kunye nosapho lwakho okanye nabahlobo ngelixa ujonge iinkwenkwezi zasebusuku phezu kwamanzi. Hamba kwidokhi yakho yabucala kwaye ukonwabele ukutshona kwelanga okuhle kuphosa phezu kweChibi laseMississippi. La mava akhethekileyo eYurt "ayakhazimla" ngokugqwesileyo kwaye siyathemba ukuba uya konwabela oku kokuphumla kokugqibela.
Le yahlukile 20' ubukhulu 314 sq ft Yurt yi-studio yengqondo evulekileyo uyilo kunye nebhedi yobukhulu bukakumkanikazi kunye negumbi lokuhlala elinebhedi ephindwe kabini / yesofa. Le Yurt iphuculweyo ineziqhekeza ezi-3 zokuhlambela ezibandakanya yangasese egungxulwayo, isinki kunye neshawari yamanzi ashushu. Uya kube ukhazimla ngekhitshi encinci epheleleyo ebandakanya ifriji / isikhenkcezisi, indawo yokupheka ezimbini ezitshisayo, ioveni yetoaster, imicrowave kunye nomatshini wekofu. Kukwakho ne-BBQ yangaphandle kwidesika enetanki yepropane ibandakanyiwe. Sinetafile yepikiniki yangaphandle yokutya kunye nezitulo ze-Muskoka ezikhululekile ukuze ujabulele isiselo ukubukela ukutshona kwelanga okuhle. Le ndawo inedokhi yayo yabucala yokufikelela kwiLake Mississippi. Indawo yomlilo yombane igcwele isifudumezi kunye neyunithi ye-AC ephathekayo inceda ekuqinisekiseni ukuba unobushushu obufanelekileyo kwaye obutofotofo ngexesha lokuhlala kwakho. I-Speed Speed Wifi ibonelelwa, i-Amazon Fire Stick TV, iNetflix kunye ne-DVD player ibonelelwa. Kutheni usebenza ekhaya xa unokusebenza ecaleni kwechibi.
32" TV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Indawo yaseCarleton yidolophu encinci ezivayo enazo zonke izinto eziphambili ezandleni zakho. Ukukhawuleza kwe-10 min drive unokufikelela kwi-Walmart, i-Independent, i-LCBO, i-Beer Store, i-Cannabis Store, i-McDonalds, i-Tim Hortons, i-A&W, i-Dairy Queen, i-Carleton Place kunye neSibhedlele seSikhumbuzo seSithili, iindawo zokutyela zendawo kunye nezikhululo zegesi. Kukho iindlela zokuhamba zasekhaya, iipaki zoluntu kunye nokufikelela elwandle. Unokuzisa iATV yakho, ecaleni okanye iibhayisekile njengoko iOttawa Valley Recreation Trail (OVRT) ikumgama oziikhilomitha ezi-2 edibanisa iidolophu ezingabamelwane.
Sinika iindwendwe zethu indawo yokuphumla kwaye zonwabe kodwa ukuba kufuneka umyeni wam uSadiq okanye mna ndingafumaneka. Sihlala i-2 min drive kude neYurt.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carleton Place